Iran maxay ka dheefaysaa haddii ay weerar ku qaaddo Sucuudiga? |
Sucuudiga ayaa sheegay in uu hayo caddaymo muujinaya in Iran ay ku lug lahayd weerarro loo adeegsaday diyaarado aan duuliye lahayn oo Sabtidii hore lagu qaaday laba warshadood oo kuwa shidaalka ah kuna yaal Bariga Boqortooyada.
Haddaba su’aashu waxay tahay: Colaad miyaa gobolka soo foodsaartay?
Marka la eego xoogga ay lahaayeen weerarradii ugu dambeeyey iyo saamaynta ay shidaalka ku yeesheen, waxay caddayn u tahay in Sucuudigu uusan iska indha tiri Karin wixii dhacay.
Waxaase suurtagal ah in Sucuudigu uu ka dhursugayo in uu soo idlaado baadhitaan ay waddo koox madax bannaan oo ka tirsan Qaramada Midoobay.
Ayadoo ay u badan tahay in kooxdaasi ay soo bandhigto natiijo la mid ah in natiijooyinka ku saabsan in weerarro noocaan oo kale ah aan la fulin Karin ayadoon la haysan taageero ka timaadda Iran, balse marka waqtigaasi soo dhammaado waxay taasi xukuumadda Riyadh waqti u siinaysaa in ay qiimayso mawqifka oo kala doorato qaababka ay uga jawaabayso weerarka.
Sucuudiga iyo xulufadiisu waxay aaminsan yihiin in Iran ay tallaabadan khatarta badan u qaadatay si ay madaxweyne Maraykanka Donald Trump ugu qanciso, in uu ka yareeyo cunqabataynta dhagaaleheedii ragaadisay.
Trump ayaa Iran ku soo rogay cunaqabatayn dhaqaale oo ba’an kaddib markii uu sannadkii hore ka baxay heshiiskii Nuclear-ka , wuxuuna ku baaqay in la isugu yimaado wadahadal shuruud cusub wata.
Hoggaamiyeyaasha Iran ayaana ka raja qaba in haddii colaadda ka taagan gobolka ay cirka isku shareerto ay taasi keenayso in quwadaha caalamka ugu waaweyni ay garwaaqsanayaan in cunaqabataynta Maraykanku ay tahay tallaabo horseedi karta jab iyo naaso beel.
Waxay ka raja qabeen in uu guulaysto qorshihii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku doonayey in Iran la siiyo 15 bilyan oo dollar si ay u dhaqan geliso heshiiskii Nuclear-ka, ayna joojiso hawlaha ay waddo ee khalkhalka gelinaya gobolka, balse Trump ayaa qorshahaas ku gacan sayray. Wuxuuna madaxweyanaha Maraykanku go’aansaday in uu cunaqabataynta ku sii kordhiyo Iran wuxuuna wasiirkiisa maaliyadda Arbacadii ka codsaday in uu cunaqabatayn ba’an ku sii kordhiyo.
Sidas darteed, waxaa laga yaabaa in Iran dantu ku khasabtay in ay awood adeegsato oo ay qaaddo tallaaban oo kale.
Suurta gal maahan in weerarradan oo kale ay dhacaan ayadoo aan amar laga haysan hoggaamiyaha sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah Ayatollah Ali Khamenei. Balse khudkabddii ugu dambaysay kuma aanu soo qaadin weerarradii ugu dambeeyey ee Sucuudiga lagu qaaday iyo sidoo kale khatarta ka dhalan karta in dagaal uu halkaas ka qarxa.
Dhanka kale Ayatollah Ali Khamenei wuxuu ku celceliyay in aanu oggolaanayn in ay wada hadlaan masuuliyiinta Iran iyo kuwa Maraykanka heerkay doonaan ha ahaadeen, inta ay cunaqabataynta Maraykanku saaran tahay dalkiisa.
Hase haateen hadheeraato ama hadhawaato e Ayatollah Ali Khamenei wuxuu ku khasbanaan doonaan in uu oggolaado wadahadalka ay riixayaan shakhsiyaad dhex dhexaad ah oo reer Iran ah.
Haddaba Sucuudigu ma qaadi doonaa tallaabo militari si Iran ay dib u gurasho u samayso?
Boqortooyadu waxay ka laba labaynaysaa in ay tallabadaas qaaddo waana mid la iska fahmi karo markii dhowr dhinac laga eego.
Dadweynaha ku nool Iran waa 80 malyan, halka Sucuudiga ay ku nool yihiin 33 milyan.
Iran waxay haysataa kumanaan gantaalla ah oo ay ku burburin karto warshadaha shidaalka ee Sucuudiga iyo xarumaha ciidamada ee Sucuudiga, halka Sucuudigu uu haysto boqolaal gantaal oo Shiinuhu uu sameeyey, awoodoodda difaacna ay kooban tahay.
Sucuudigu wuxuu haystaa in le’eg diyaaradaha ay Iran haysto, waana kuwo ka horumarsan kana awood badan diyaaradaha duqoobay ee Iran ee aan la isku hallayn Karin.
Hase ahaatee Iran waxay ku tiirsan tahay wakiillo iyo taagereyaal ay ku leedahay dhammaan gobolka, iyo Sucuudiga gudihiisaba.
Sucuudigu wuxuu haatan dagaal faraha looga gubtay kula jiraa maleeshiyaadka Xuuutiyiinta ee Yemen ee Iran ay taageerto.
Inkasta oo ay ciidamo Maraykan ah, diyaarado iyo maraakiib dagaal ay ku sugan yihiin gobolka Khaliijka, haddana madaxweyne Trump wuxuu ka warwareegayaa in uu gelo dagaal caynkaas ah.